Pirates Metrics: Analytics azo ampiharina amin'ny famandrihana | Martech Zone
Miaina amin'ny vanim-potoana mora sy mora kokoa ny famolavolana vahaolana ho anao izahay. Ny ankamaroan'ny fitaovana nentim-paharazana amin'ny Internet dia natsangana tamin'ny vanim-potoana hafa - izay tsy nisy akory ny SEO, marketing marketing, media sosialy, ajax, sns. Saingy mbola manohy mampiasa ireo fitaovana izahay, mamela ny fitsidihana, ny fizarana pejy, ny fitsapana ary ny fivoahana manaparitaka ny fanapaha-kevitra tsy fantatsika na tena nisy fiatraikany na tsia ny farany. Ireo mari-pahaizana izay manadanja indrindra indrindra dia tsy misy akory ary mitaky fivoarana sy fampidirana fanampiny.
Pirates Metrics manampy anao hanao fandalinana be loatra sy ampitahaina amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny metrika 5 (AARRR):
fahazoana - Mahazo ilay mpampiasa ianao. Ho an'ny vokatra SaaS dia matetika midika hoe fisoratana anarana.
fampahavitrihana - Mampiasa ny vokatrao ny mpampiasa, manondro fitsidihana voalohany tsara.
fihazonana - Manohy mampiasa ny vokatrao ny mpampiasa, manondro fa tiany ny vokatrao.
anarana - Tian'ilay mpampiasa ny vokatrao ka manondro mpampiasa vaovao hafa izy.
Fidiram-bola - Mandoa anao ny mpampiasa.
Pirates Metrics Miorina malalaka amin'ny Metrics fanombohana ho an'ny lahatenin'i Pirates nataon'i Dave McClure, fa ny mpamorona dia tsy te hanao fitaovana fandalinana fotsiny hanara-maso rehefa nisy zavatra mahaliana nitranga. Izy ireo dia namolavola ny Pirate Metrics hanampy amin'ny famahana olana hafa, izany hoe marketing marketing amin'ny Internet.
Pirates Metrics manangona ireo metatra manan-danja 5 ho herinandro isan-tokantrano, ary avy eo ampitahao amin'ny herinandro ambony. Amin'ny alàlan'ny fanamarihana ireo hetsika ara-barotra natao nandritra ny herinandro (fanaovana fampielezan-kevitra doka, A / B fitsapana ny rafitry ny vidinao sns) dia azonao atao ny milaza hoe inona avy ireo hetsika manatsara ny AARRR ny tahan'ny.
Pirates Metrics koa dia mamoaka tatitra momba ny varotra izay havaozina tsy tapaka. Ao amin'ny tatitra momba ny varotra dia mitady lamina amin'ny fihetsiky ny mpampiasa ianao ary avy eo manome torohevitra momba ny fomba hanatsarana ny isa AARRR anao.
Ny tatitry ny varotra dia nandavaka lalina kokoa ny antontan'isa AARRR anao, ary manome torohevitra momba ny fomba hanatsarana ireo isa ireo. Ohatra, ny Pirate Metrics dia mamantatra ireo mpampiasa izay tsy nahavita ny lahasa lehibe nataonao hatramin'ny nandoavany ny serivisinao farany, mba hahafahanao mifandray amin'izy ireo hahalalanao raha manana olana izy ireo alohan'ny hanafoanana azy ireo tsy misy fampandrenesana. Ny sehatra dia mamaritra ihany koa raha ny mpampiasa izay mihetsika miadana kokoa na haingana kokoa noho ny salan'isa mihodina dia mitaky vola bebe kokoa, amin'izay ianao afaka mandray fanapahan-kevitra momba ny vondrona hifantohana amin'ny varotrao.
Tena tsy misy vokatra natao manokana hanarahana ny hetsika SaaS, hamakafaka izany data izany, ary avy eo manolotra vahaolana izay hanampy an'io orinasa io hahazo vola bebe kokoa. Pirates Metrics manolotra andrana 1 volana izay manomboka rehefa manomboka mandefa data aminay ny mpampiasa vaovao, ary ny firafitry ny vidiny misy ambaratonga manomboka amin'ny $ 29.00 isam-bolana.
Tags: aarrrfahazoanafanadihadiana azo ataofampahavitrihanaAnalyticsmcclure davemetatra piratyanaranafihazonana
Sendgine: alamino ny lamasinina eritreritrao